Ukwenziwa kwefestile yehlobo e-2015
Ukwenziwa kwefestile ehlobo lwe-2015: i-makeical makeup yolwandle
Soloko ukhangele umzobo kunye nokunyanzelisa - yiyo i-credo yale fesisti. Kwaye kwanokuphumla echwebeni kunzima kuye ukucinga ngaphandle komfanekiso ocingayo kunye nokwenza okufanelekileyo. Kuthe malunga nokwenza uhlobo olwandle olufakekayo oluya kuba lufanelekileyo ehlotyeni ka-2015 kwaye kuya kuxutyushwa kwinqaku lethu.
Ukwenziwa kwebhantshi ngo-2016: i-shades ezifashiniweyo Ukwenzela okwenziweyo kwithuba elwandle lolwandle 2016
Ukwenziwa kwebhantshi ngo-2016: iifashini zefashoni
Ngexesha elizayo lonyaka-ntwasahlobo, abaqulunqi banqume ukuvusa iimeko ezikhohliweyo ezingama-80 nee-90. Kwaye akukho nkxalabo echaphazelekayo kungekuphela nje kweempahla ezifake imfashini, kodwa kunye nokugxekwa ekwenzeni. Ngoko, ukucinga ukuba uhlobo lwamahlobo ehlobo lwe-2015 lukhuni ngaphandle kokubhaliweyo okulandelayo: iintolo ezinemibala ebomvu, izithunzi eziluhlaza okomvu, obomvu kunye nobomvu obomvu.
I-Manicure ye-Fashionable Ihlobo 2016: Ifoto
Enyanisweni, kwakukho indawo kwiindawo zokudibanisa kunye nokuzenzela kwindlela yokuziphatha. Kuya kuba yindlela efanelekileyo kwiholide yolwandle. Masikhumbuze, ukuba i-makeup ye-nude ihluke ngobukhulu bendalo kunye nobume bemifanekiso. Into ebaluleke kakhulu kule ndlela yokwenza - kufuneka adale ingqiqo yokungahambi kakuhle kwezonyiso ebusweni bakhe. Eyona ndlela ihamba phambili kulezi njongo, iindlela zokuzongamela izidalwa zendalo: i-beige, isanti, ikhofi, i-pinki, i-peach. Esikhundleni se-carcass emnyama, khetha umbala omdaka, uze ubeke endaweni evulekileyo yomlomo kunye nesicwecwe somlomo.
Okwenziwe okwenziwe ngexesha lonyaka wobunxwemeni 2016
Ngamafesholo ehlobo ehlobo, siye safumanisa, ngoku makhe sifumene indlela yokwenza izicwangu zelwandle ukuze ziphathe kakuhle kwaye zikhangeleke. Masiqale ngezinto ezisiseko. I-cream cream yamancinci ithatyathwa endaweni engcono kunye ne powder kunye nomthunzi wethusi. Uza kubamba ngcono kwaye amnike ubuso obunjani. Iqhinga elincinci - faka umthunzi we-shade yomthunzi kwinqanaba elisezantsi lebunzi, kunye nomgca wokukhula kweenwele, phantsi kwe-cheekbone, ngaphantsi kwe-eyebrow kunye nommandla we-decollete. Oku kuya kunika isikhumba isikhephelo esikhethekileyo.
Ukutshintshela emva kwesikhumba sebhedu kubheka ngokwemvelo "ukuxhasa" i-pink-peach scale. Faka isicelo esisihlathini kwindawo yesitye, phantsi kwehlosi, ngasempumleni yempumlo kunye nasecaleni lesinki uze udibanise ngokucophelela.
Ukugcina izithunzi zide kwaye imibala ibe yinto ecacileyo, sebenzisa ukufihla ngaphambi kokuba uyisebenzise. Faka isicelo ngebhayisiki kwindawo engaphantsi kwamehlo nakwiiyolidi eziphezulu. Emva koko sebenzisa i-cream shades - ziya kusebenza njengesiseko sezithunzi eziphekiweyo, ezijonge i-creamier kwi-cream kwaye zihlala ixesha elide. Umthunzi otyongwe uphezulu usebenze kakuhle nge-brush yamanzi.
Kwakhona kusetyenziswe ulwandle lwamanzi ukusetyenziswa kweefestile ezahlukeneyo zeepencils zezantsi kunye neelusiki ezingaphezulu - enye yeendlela ezenziwa ehlobo lika-2015. I-Mascara ikhetha ukungena kwamanzi angcono, kukhetha i-shadow shade emnyama, emnyama nangomnyama. Ukugqiba ukuqhutyelwa kwebala lolwandle olusenyakatho ka-2015, usebenzisa umthunzi wendalo wokukhanya ngomlomo okanye i-gloss bri gloss.
Indlela yokupenda ngexesha lokubanda: ezi zi-4 zecandelo ziya kunceda ukhangeleke!
Indlela yokwenza iWorld New Year's makeup
Ukuqulunqwa kwefestile 2015: iindawo ezikhoyo zangoku zika-2015
Ikhalenda yeLunar yeenwele kunye nezipikili ezincitshiweyo ngoJanuwari 2018: iintsuku ezifanelekileyo ezikhethiweyo kwiibhile
I-Basset Hound - inzala yezinja
Iingcebiso Zokulungisa Abaqalayo
3 "i-sophon operas", e-90 yabujonga ilizwe lonke
Amadoda aphezulu ebomini bhinqa
Isobho se-spicy neembotyi
Ukujonga njani umsebenzi kwiinkathazo?